नेकपाका सां`सद भन्छन्- ‘गौतमलाई सां`सद बनाउने नि`र्णयलाई जनताले नि`को मानेका छैनन्, पुनर्वि`चार गर्नुपर्छ’
September 8, 2020 September 8, 2020 adminLeaveaComment on नेकपाका सां`सद भन्छन्- ‘गौतमलाई सां`सद बनाउने नि`र्णयलाई जनताले नि`को मानेका छैनन्, पुनर्वि`चार गर्नुपर्छ’
वामदेव कमरेडले ‘रिथिं.क’ गर्दा राम्रो हुन्छ । रा,जनी,ति गरेपछि जनताको प,क्षबाट जे कुरा आएका छन् ती सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ । नि,र्णय सचिवालयले गरेको हो, उसले नै फि,र्ता गर्नुपर्छ : बिन्दा पाण्डे
पा,र्टीले पठा,उन खोजे पनि गौतमले ‘म चु,नाव हारेकाले यो तरिकाले सं,सदमा जान्न’ भन्नुपर्थ्यो । म भएको भए नि,र्वाचन हा,रिसकेपछि त्यहीँ का,र्यकालमा अर्को तरिकाले सं,सदमा जान्नथे : विशाल भट्टराई/
यो विषयमा स्थायी कमिटी बैठ,कमा कमसेकम जनताले अ,सहज मान्ने नि,र्णय गर्न हुन्न भन्छौँ । हामी जनताको प्र,तिनि,धित्व गर्ने पा,र्टी भएकाले जनताले जे काम अ,सहज मान्छन् त्यो गर्नुहुन्न : हरिबोल गजुरेल
काठमाडौँ — स,त्तारुढ नेकपाका सां,सदहरूले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई रा,ष्ट्रिय सभामा म,नोनित गर्ने आफ्नो
सचिवालयको नि,र्णय का,र्यान्वयन गर्न नहुने बताएका छन् । जनताले मन नपराएको र चौ,तर्फी वि,रोध भइरहेकाले रा,ष्ट्रिय सभाको रा,ष्ट्रपतिले म,नोनित गर्ने रि,क्त सिटमा गौतमलाई स,रकारले सिफा,रिस गर्ने नि,र्णय स्थ,गित गर्नुपर्ने सं,घीय सं,सदका दुवै सदनमा रहेका नेकपाका सां,सदहरूको माग छ ।
सचिवालयले गरेको नि,र्णयको चौ,तर्फी वि,रोध भएकाले उपाध्यक्ष गौतमले नै अब जान्न भन्नुपर्ने उनीहरूको आ,ग्रह छ । संघीय सं,सदको प्र,तिनिधिसभा नि,र्वाचनमा प,राजित भएपछि सोही कार्यकालमा अर्को बाटोबाट सं,घीय सं,सदको सदस्य हुन नहुने नेकपाका सां,सदहरूको भनाइ छ । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नेकपाका एक दर्जन सां,सदले गौतमलाई रा,ष्ट्रिय स,भामा मनो,नित गर्ने नि,र्णयले लो,कतन्त्र कम,जोर बनाउने र रा,ष्ट्रियसभाको शाख गिराउनुका साथै जनताले यस सम्ब,न्धमा गर्ने प्र,श्नको ज,वाफ दिन गा,ह्रो बताएका छन् । उनीहरूले नि,र्णय फि,र्ता लिएर पा,र्टी नेतृ,त्वले आ,त्मआ,लोचना गर्नुपर्ने पनि मा,ग राखेका छन् ।
जनताले नि,र्वाचित गरेर मु,लुक संचा,लनको चा,बी दिएका नेताहरूले जनताबाट प,राजित नेतालाई सं,विधानको म,र्मका साथै पा,र्टीको विधि र वि,धा,नविरु,द्ध हुने गरी सं,सदमा ल्याउन नहुने नेकपाका सां,सदहरूको भनाइ छ ।
रा!ष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यक्ति आफ्नो क्षे,त्रमा वि,ज्ञ हुनुपर्नेमा सं,विधानको म,र्मवि,परीत सं,सदीय नि,र्वाचनमा परा,जितलाई अगाडि बढाउनु राष्ट्र,पति सं,स्थाको मर्या,दामा पनि आँच पु,र्‍याउने कार्य हुनजाने भएकाले समयमै ने,तृत्वले गल,त नि,र्णय सच्या,उनुपर्ने भन्दै सां,सदहरूले दबा,ब दिन थालेका हुन् ।
सां,सद वि,शाल भट्टराईले रा,ष्ट्रियसभामा जान्न भनेर उपाध्यक्ष गौतमलाई नै,तिकता प्र,दर्शन गर्न आ,ग्रह गरे । ‘पा,र्टीले पठाउन खोजे पनि व्य,क्तिले म चुना,व हारेकाले यो तरिकाले सं,सदमा जान्न भन्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘का,नूनी दृ,ष्टिकोणले उहाँ जान नमिल्ने होइन । नै,तिक रूपमा जाने कि नजाने भन्ने व्यक्तिको इच्छासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । एउटै कुरालाई एक व्यक्तिले नै,तिक मान्छ भने अर्कोले अनै,तिक । म भएको भए एउटा नि,र्वाचन हा,रिसकेपछि त्यहीँ कार्य,कालमा अर्को तरिकाले सं,सदमा जान्नथें ।’
गौतम सं,घीय सं,सदको यो का,र्यकालका लागि प,राजित भएकाले पा,र्टीले अगाडि बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो । पा,र्टी र सं,गठ,नलाई बलियो बनाउने र अर्कोपल्ट नि,र्वाचित हुने, जाने । उहाँ चाहिने, ठूला यो,गदान गर्ने नेता हो । त्यसैले अहिले रा!ष्ट्रियसभामा नजाँदा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ,’ भट्टराईको भनाइ छ ।
सचिवालयको नि,र्णयलाई लिएर जनस्तरमा प्रश्न उठिसकेकाले नेकपा नेतृ,त्व र गौतमले रा,ष्ट्रियसभामा जानेबारे पु,नर्विचार गर्नुपर्ने सां,सद बिन्दा पाण्डेको भनाइ छ । पा,र्टीले गरेको निर्णय का,र्यान्वयन गर्न नहुने र व्यक्तिले पनि जान्न भन्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘यति कुरा भइसकेपछि वामदेव कमरेडले रि,थिंक गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । रा,जनीति गरेपछि जनताको प,क्षबाट जे कुरा आएका छन् ती सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ । सकिन्छ भने त्यो सुनौं । नि,र्णय सचिवालयले गरेको हो । उसले नै फि,र्ता गर्नुपर्छ । स्थगित गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । निर्णयमा ने,तृत्वले पुनर्वि,चार नगर्ने हो भने त्यसले जनता र का,र्यक,र्तामा राम्रो प्र,भाव नपर्ने उनले बताइन् ।
पा,र्टी र नेता विधिअनुसार चल्नुपर्नेमा व्यक्तिअनुसार विधिको व्याख्या गर्न नहुने सां,सद विद्या भट्टराईको भनाइ छ । उनले पा,र्टी र जनताले दिएको जि,म्मेवारी ने,ताहरूले पूरा गर्नुपर्नेमा थप जि,म्मेवारी नपाए अ,स्तित्व नै सकिन्छ भन्ने मान,सिकताले काम भइरहेको बताइन् ।
‘वि,धि र प,द्दति आफ्ना र आफ्ना मान्छेका लागि एउटा, अरुका लागि अर्को भन्ने स्थापित छ । त्यो कुरा ग,लत हो । कहिले कुन पात्र आउला, कहिले कुन त्यो फरक कुरा हो । रा,जनीतिभित्र यो एउटा सं,स्कार भएर आएको छ,’ उनले थपिन्, ‘अभ्यास नभई त व्यक्तिले त्यस्तो मनोविज्ञान बनाउन सक्दैन । यो कुनै पात्रलाई उदा,हरण बनाउँदा सं,स्कार मौ,लाउँछ । पात्र वि,स्थापित हुन्छ सं,स्कार कायम रहन्छ । हामीले बनाएका नीति का!र्यनी,तिलाई बोकिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने प्रश्न उठेको छ । आज ने,ताले विधि र पद्द,ती नबोक्दा भोलि का,र्यकर्ताले पनि त्यस्तै गर्ने हुन् ।’ लो,कतन्त्रको प,रिष्कार सं,विधान, व्यव,हार र सो,चले हुने भए पनि नेपाली नेताहरूको सोच त्यसअनुरुप हुन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘हामीले सं,विाधन बनायौं । त्यो अनुसार व्य,वहार र सोच हामीमा हुनुपर्ने हो, त्यो बाँकी छ । हाम्रो रा,जनीतिमा त्यो रु,पान्तरण हुन बाँकी छ,’ उनले भनिन ।
नेकपा स्थायी कमिटी सद,स्यसमेत रहेका सां,सद हरिबोल गजुरेलले नेकपा सचिवालयको नि,र्णयलाई जनताले ‘निको नमानेको’ बताए । जनताले अ’सहज मानेको नि’र्णय पार्टीले गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । गौतमबारे अहिले गरेको नि’र्णय फि’र्ता गर्न त्यति क’ठिन नभएको पनि उनको तर्क छ । ‘अहिलेको नि’र्णय केही पनि होइन । अस्ति त गौतमलाई रा’ष्ट्रियसभामा लगेर प्र’धानमन्त्री बनाउन भनेर संवि’धान सं’शोधन गर्न माधवकुमार नेपालको संयो,जकत्वमा का’र्यदल नै बनायो । त्यो नि’र्णय ग’म्भीर थियो,’ उनले थपे, ‘यो विषयमा स्थायी कमिटी बैठ,कमा क,मसेकम जनताले अ’सहज मान्ने नि’र्णय गर्न हुन्न भन्छौं । हामी जनताको प्र’तिनिधित्व गर्ने पा’र्टी भएकाले जनताले जे काम अ’सहज मान्छन् त्यो गर्नुहुन्न ।’
प्र’तिनिधिसभा अ’र्थसमितिको स’भापतिसमेत रहेका सां’सद कृष्णप्रसाद दाहालले पा’र्टी एकतापछि वि’धि र पद्द’ति तो’डमरोड गरेर नि’र्णय भइरहेको बताए । वामदेव गौतमलाई रा’ष्ट्रिय स’भामा लैजान सं’विधानले नरोक्ने भए पनि पा’र्टी वि’धान र नी’तिमा नै मनोनित गर्ने व्यक्तिबारे लो’कतन्त्र अनु’कूल बनाउनुपर्ने आ’वश्यकता यो घट’नाले देखाएको दाहालले बताए । ‘हामीले पा’र्टीका आन्त’रिक का’नुनहरू अलि परि’मार्जित र लो’कतान्त्र अनुकू,ल बनाउनुपर्ने आ’वश्यकता महसुस भयो,’ गौतमलाई रा’ष्ट्रियसभामा लैजाने प,क्षको स’मर्थन गरिरहेकाहरूले २०१५ सालमा बिपीले पनि यस्तै गरेका थिए भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै दाहालले थपे, ‘२०१५ सालमा बिपीले पनि यस्तै ग’ल्ती गरेका थिए नि भनेर उदाहरण दिएर अहलेको ठीक भनिरहेका छन् । त्यो विगतको ग’लत उदाहरणले अहिलेको ग’लत कुरालाई थुनछेक गर्नु राम्रो होइन । ग’लत कुराको स’हारा लिएर अर्को ग’लत गर्नु हुँदैन ।’ २०१५ सालमा स’भामुख संस’दको सद,स्य नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
रा’ष्ट्रपतिबाट म’नोनित सां’सद कुनै न कुनै विषयको विज्ञ भए राम्रो हुने सां’सद विमला राई पौड्यालको भनाइ छ । ‘यो रा’जनीतिक विषय भएकाले धेरै बोल्न मिल्दैन । तर, रा’ष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने पदमा विज्ञहरू भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धा’रणा हो,’ रा\_ष्ट्रपतिबाट मनो,नित सां’सद पौड्यालले थपिन्, ‘रा’ष्ट्रियसभामा वि,ज्ञहरूको पनि ठूलो भू,मिका हुन्छ । कहिलेकाँही रा’जनीतिक द’लभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने र नि’र्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाँही वि’धेयक सां’सदले हेर्दाखेरी द’लीय घेरा’मा मात्रै सी,मित हुन्छ । त्यस्तो अ’वस्थामा विभिन्न प्रकारका वि,ज्ञको जरुरी पर्छ । त्यसैले कम्तीमा रा’ष्ट्रपतिबाट मनो,नित हुने सां’सद वि,ज्ञ हुँदा राम्रो हुन्छ ।’
‘यो निर्णयबारे स्थायी कमिटीमा बोल्छौं’
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक भदौ २६ गतेका लागि बोलाइएको छ । पा’र्टीभित्रको वि’वाद च’र्किँदै गएपछि साउन १३ गते स्थ’गित भएको स्थायी कमिटीको बैठक २६ गते बोलाउने तय अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेका छन् ।
स्थायी क,मिटीको बै,ठकमा वामदेव गौतमलाई रा’ष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने नि’र्णयबारे कुरा उठाउने सां’सदसमेत रहेका स्थायी कमिटी सद,स्यहरूले बताएका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सचिवालयले गरेको निर्ण,यबारे सा’र्वजनिक रूपमा सुनेको तर औ’पचारिक रूपमा जानकारी नभएकाले आफूले स्थायी कमिटीमा नै धा’रणा राख्ने बताए । ‘स्थायी कमिटी बैठक बोलाइसकिएको छ त्यहाँ कुरा राख्छु । बाहिर भइरहेका कुराबारे टि’प्पणी छैन,’ उनले भने ।
स्थायी कमिटी स,दस्य पम्फा भुसालले पनि उक्त विषयमा आफूले स्थायी कमि,टीमा नै कुरा राख्ने बताइन् । सां’सद देवेन्द्र पौडेलले पनि स्थायी कमि,टीमा कुरा उठ्नसक्ने बताए । सा’र्वजनिक रूपमा पा’र्टीले गरेको निर्णयबारे आ’लोचना आइरहेको भन्दै उनले ती आ’लोचना सुन्नुपर्ने बताए ।
‘पा’र्टीले नि’र्णय गरेपछि का’र्यान्वयन गर्नुपर्ला । बाहिरका कुरा आइरहेका छन् । ती सुन्न पर्छ । स्थायी कमि,टीमा पनि आव’श्यकता परेपछि कुरा उठ्छ,’ उनले भने ।अध्यक्ष तथा प्र’धानमन्त्री ओली नि’कट एक स्थायी कमिटी सद,स्यले पनि प्र’धानमन्त्रीले मनोन,यन सि’फारिस गर्छु भनेपछि बाहिर आ’लोचना आइरहेकाले त्यसबारे बै,ठकमा छल,फल हुनुपर्ने बताए ।
गौतमका कारण नेकपाको नि’र्णयमाथि सं’वैधानिक प्रश्न उठ्छन्
वामदेव गौतमले आफू सां’सदमात्रै बन्न रा’ष्ट्रियसभामा जान नलागेको घोष’णा गरिसकेका छन् । सार्व’जनिक रूपमा उनले आफू मन्त्री बन्नका लागि सं,घीय सं’सदको माथिल्लो स,दनमा जान लागेको बताएका छन् ।
नेकपाका सां’सदहरूले भने गौतमको उक्त घो’षणाले पा,र्टीमाथि संवै’धानिक प्रश्न उठाएको बताएका छन् । सां सद बिन्दा पाण्डेले अहिले नेकपाको ने’तृत्व र गौतममाथि राजनी,तिक र नै तिक प्रश्न मात्रै उठिरहेकोमा भ’विष्यमा गएर सं’वैधानिक प्रश्न उठ्ने आक,लन गरिन् । गौतमको म’न्त्री बन्ने ल’क्ष्यका का’रण त्यस्तो प्रश्न पा’र्टीमाथि उठ्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले रा’जनी,तिक र नै’तिक प्रश्न मात्रै उठिरहेको छ । योभन्दा पछाडि भने सं’वैधा,निक प्रश्न उठ्नेछ । उहाँ म’न्त्री हुने जुन च,र्चा छ त्यो सं’विधानसँग जोडेर प्रश्न उठ्ने कुराहरूलाई या,द गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्र’धानमन्त्री नि’कट एक स्थायी कमिटी सदस्यले गौतमलाई म’न्त्री हुनबाट सं’विधानले रोक्ने र म’न्त्री बन्न खोजेमा सं’वैधानिक प्रश्न उठ्ने बताए । ‘नि’र्वाचनमा परा’जित व्यक्ति म’न्त्री हुने छैन भन्ने सं’विधानमा लेखेकै छ,’ उनले भने । सं’घीय सं’सदको सद,स्य बनेपछि जो पनि म’न्त्री बन्न पाइहाल्छ नि भन्ने बाहिर च,र्चा चलेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा ती स्थायी कमिटी सदस्यले थपे, ‘जनताले इ’न्कार गरिसकेपछि त्यस्तो व्यक्ति त्यो का’र्यकालभरी म’न्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने सं’विधानको प्र’ष्ट व्यव,स्था हो ।’
वामदेव गौतमले आगामी प्र’तिनिधिसभा नि र्वाचनमा आफू लड्ने घो’षणा गरेकोबारे पनि नेकपाका सां’सदहरूले आ’लोचना गरेका छन् । उनीहरूले आफू मात्रै सबै पदमा हुनुपर्छ भन्ने मा’नसिकता गौतममा देखिएको बताएका छन् । पा’र्टी वि’धानमा नभएको उपा,ध्यक्ष प,द बनाइएको, सं’गठन विभाग प्रमुखजस्तो पा’र्टीलाई श’क्तिशा,ली बनाउने जि’म्मेवारी पाउँदा पनि अपे,क्षाअनुसार काम नभएको तर सबै पद आफूले खोजेको भन्दै उनीहरूले अ’सन्तुष्टि व्य,क्त गरेका हुन् ।
गौतमलाई रा’ष्ट्रियसभामा म,नो,नित गरिए उनको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । तर, उनले प्र’तिनिधिसभाको दुई वर्षपछि हुने निर्वा’चनमा ल,ड्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आफू पुरै कार्यकाल रा’ष्ट्रियसभा सद,स्य भएर नबस्ने बताउने गरेका छन् ।
प्र’धानमन्त्रीलाई बा,ध्य पारियो
वामदेव गौतमलाई रा’ष्ट्रियसभाको रा’ष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने सिटमा लैजाने नि’र्णयमा सह’मति जनाउन प्र’धानमन्त्री केपी शर्मा ओली बा’ध्य भएको नेकपा सां’सदहरूको बुझाइ छ । अध्यक्ष तथा प्र’धानमन्त्री ओली इतरका सचिवालय सदस्यहरूले गौतमलाई रा’ष्ट्रियसभामा मनो,नित गर्ने नि’र्णयमा सह,मति जनाउन बाध्य पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘गौतमलाई सि’फारिस गर्ने नि’र्णयमा स’मर्थन गर्नु प्र धानमन्त्रीको बा’ध्यता हो । पा’र्टीभित्र क’म्पोजिसन नै त्यस्तो छ कि सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने छ । मिलाएर लगेन, एकलौ,टी चल्यो, पा’र्टीका कुरा सुनेन भन्ने अ’सन्तुष्टि आइरहेका छन्,’ सां’सद विशाल भट्टराईले भने, ‘त्यस्तो गु’नासो गर्नेहरूलाई सुन्दा यस्ता वि’वादित कुरा आइरहेका छन् ।’
वि’धि र पद्द’तिअनुसार पा’र्टी चलाउनुपर्ने भन्दै आएका नेताहरूले नै वि’धिविप,रीत नि’र्णय गरेको सां’सद पाण्डेको भनाइ छ । ‘नी’ति, वि’धि र प’द्दतीका कुरा जुन चलिरहेको छ त्यसको ने’तृत्व अस्तिका दिनसम्म भैंसेपाटीको बैठ,कले गरेको भन्ने थियो । तर भैंसेपाटीको बैठ,कबाट आएर नै वामदेव गौतमलाई रा’ष्ट्रियसभामा लानुपर्छ भन्ने प्र’स्ताव आयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो काम वि’धि र पद्द’तिभित्र पर्छ कि पर्दैन ? त्यसको ने’तृत्व कसले गरेको थियो भन्ने कुरा पनि हुन्छ ।’ दाहाल-नेपाल समूहले भैंसेपाटीस्थित गौतमको घरमा बसेर उ’क्त नि’र्णय गरेको थियो ।
स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलले पनि पा’र्टीभित्रको समी,करणले प्र’धानमन्त्रीले उक्त नि,र्णय मान्न बा’ध्य हुनुपरेको बताए । ‘पा’र्टीको समी,करण, नेता’हरूको प,क्ष र वि’पक्ष सबै चिजले गर्दा यस्तो कुरा हुँदो रहेछ,’ उनले भने ।
गौतमलाई रा’ष्ट्रिय स’भामा लैजाने नेकपाको नि’र्णयलाई लिएर सा’र्वजनिक रूपमा भइरहेको आलो’चना लगायतका विषयमा गौतमसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन् । उनको सचिवालयले भने सां’सद मनो,नित भइसकेपछि मात्रै गौतम यी विषयमा बोल्ने त्यसअघि केही नभन्ने प’क्षमा रहेको जानकारी दियो ।
भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्र’धानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रा’ष्ट्रियसभाको रा’ष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने रि’क्त सिटमा गौमतमलाई ‘सर’कारले सि’फारिस गर्ने बताएका थिए । नेकपाको गत फागुन १४ गतेको सचिवालयको बैठ,कले गौतमलाई रा’ष्ट्रिय सभामा लैजाने नि’र्णय गरेको थियो । उक्त नि’र्णयमा ओलीले अ’सह,मति जनाउँदै का’र्यान्वयन गरेका थिएनन् ।
त्यतिबेला गौतम दाहाल- नेपाल खेमामा थिए । पछिल्लो समय पा’र्टीभित्र वि’वाद बढ्दै गएको अ’वस्थामा उनी ओलीको खेमामा लागेका थिए । रा’ष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्र’धानमन्त्री हुने सं’वैधानिक व्य’वस्था नहुन्जेल आफू त्यहाँ नजाने बताउँदै आएका उनी पछिल्लो समय रा’ष्ट्रियसभामा जान तयार भएका हुन् । रा’ष्ट्रियसभामा सर’कारको सि\_फारिसमा राष्ट्र’पतिले मनोनित गर्नुपर्ने एक सां’सदको सिट फागुन २० गतेयता रि’क्त छ ।स्रोत ekantipur
उपत्यका छिर्ने ना’कामा से,ना परिचालन गरी नि’षेधाज्ञा हटाउन,थिमि मेयरको मा,ग
कुलमानलाई उर्जा मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पुग्यो ओली-प्रचण्डसमक्ष…हेर्नुहोस् ।